DHMİ 2019 Taom-piaramanidina novokarin'ny Air, mpandeha ary mpitatitra entana | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06DHMİ 2019 Taom-pifandraisana Novambra, nambara ny fitaterana mpandeha sy mpandeha entana
06 / 12 / 2019 Ankara 06, Central Anatolia, ANKAPOBENY, Airports, Highway, Headline, TORKIA
dhmi taona november dia mpandeha fiaramanidina fiaramanidina mpandeha fiaramanidina ary mitondra entana
Ny Tale jeneralin'ny National Airports Authority (DHMI), 2019 tamin'ny Novambra tamin'ny fiaramanidina fiaramanidina, mpandeha ary antontan'isa momba ny entana.
Araka izany, tamin'ny volana novambra tao amin'ny 2019;
Isan'ny fiaramanidina fiaramanidina ary mandeha eny amin'ny seranam-piaramanidina; 68.149 ho an'ny sidina an-trano sy 45.941 ho an'ny sidina iraisam-pirenena. Nahatratra ny 152.325 ny fitateram-piaramanidina maneran-tany izay be loatra.
Tamin'ity volana ity, Torkia manompo ao an-tokantrano ao amin'ny seranam-piaramanidina mpandeha fifamoivoizana manerana 7.957.237, mpandeha iraisam-pirenena dia 6.566.620 fifamoivoizana. Araka izany, ny fifamoivoizana fitateram-bahoaka niaraka tamin'ny mpandeha fitateram-bahoaka mivantana dia nahatsapa ho 14.535.560 tao amin'io volana io.
Fiantsonan'ny seranam-piaramanidina (entana, mailaka ary entana); Tamin'ny volana Novambra, ny 64.269 taonina ao anaty tsipika an-trano sy ny 243.172 taonina amin'ny zotra iraisam-pirenena dia nahatratra 307.441 taonina.
Araka ny zava-misy 11 isam-bolana (Janoary-Novambra);
Ny fiaramanidina fiaramanidina ary hiainga amin'ny seranam-piaramanidina dia lasa 777.408 amin'ny sidina an-trano ary 669.761 amin'ny sidina iraisam-pirenena. Noho izany, ny zotram-piaramanidina 1.885.567 iray dia notompoin'ny tafahoatra.
Torkia 92.842.325 ny mpandeha an-trano ankapobeny fifamoivoizana seranam-piaramanidina, izay 102.528.086 ny mpandeha iraisam-pirenena ao amin'io vanim-potoana fifamoivoizana nahatratra an'i 195.618.392 mivantana fitaterana mpandeha amin'ny mpandeha tanteraka miara-fifamoivoizana.
Mandritra ny vanim-potoana iadian-kevitra, ny fifamoivoizana (entana, entana ary kitapo) fifamoivoizana ny seranam-piaramanidina; 763.408 taonina ao amin'ny tsipika an-trano sy ny 2.395.847 taonina amin'ny tsipika iraisam-pirenena.
34.781 AIRCRAFT, 5.505.078 PASSENGER NANOMPOANA NANOMPOANA VOIVAVY NOMPO ISTANBUL
Tamin'ny Novambra, ny seranam-piaramanidina Istanbul sy fitaterana an'habakabaka dia 8.709 ho an'ny sidina an-trano ary 26.072 amin'ny sidina iraisam-pirenena.
Ny fifamoivoizana mpandeha dia 1.359.920 ho an'ny an-trano sy 4.145.158 ho an'ny sidina iraisam-pirenena.
Tao anatin'ny vanim-potoana iraika ambin'ny folo (Janoary-Novambra), ny fiaramanidina 295.163 sy ny fifamoivoizana 47.297.757 dia niseho tao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul.
Tamin'ny vanim-potoana iraika ambin'ny folo volana 2019, nisy ny fifamoivoizana 135.637 tao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul Atatürk, izay nitohy ny hetsika fiaramanidina sy ny fitaterana entana.
Araka izany, ny fifamoivoizana fiaramanidina 430.800 tanteraka dia notanterahina tao amin'ireo seranam-piaramanidina roa ireo tamin'ny vanimpotoana ihany; Nisy mpandeha 63.370.291 nanompo.
DHMI dia manambara ny fiaramanidina, ny fiara fitateram-bahoaka ary ny fitaterana entana amin'ny volana Novambra
DHMİ, 2018 Taom-piaramanidina fiaramanidina, mpandeha ary mpitatitra entana…
Ny DHMI dia manambara ny fiaramanidina, ny sari-tany sy ny lahatahiry am-pitadiavana amin'ny Martsa
Funda Ocak no mpitantana ny DHMİ, 'DHMİ dia miasa…
Nambara ny lalàna DHMİ Promotion Promotion
Tetikasa hanamaivanana ny fifamoivoizana
Ny DHMI dia manambara ny fiaramanidina, ny fiaramanidina ary ny cargo amin'ny volana febroary
Greater munisipalin'ny Istanbul artan
Fanamarihana Tender: Mpandeha mpandeha sy mitondra entana ary mpandeha…
SAE: Isan'ny airline mpandeha any Torkia tamin'ny Septambra ...
Navoakan'ny DHMI ny mpandeha 6 tapitrisa nafindran'ny Air
Bolgaria sy Torkia Mpandeha Railway Companies sy ny ...
Ny DHMİ 2019 dia nanombohana ny fihaonan'ny fandrindrana taom-panompoana
Nifarana ny Fivoriana fiomanana ny DHMİ 2019
Angon-drakitra DHMİ 2019 Taom-baovao Novambra
Fiaramanidina fiaramanidina fiaramanidina
Tonga tany amin'ny andiany faha-14 ny aotom-piaramanidina